तपाईको आजको राशिफल : २०७४ साल माघ २५ गते विहिबार – Etajakhabar
तपाईको आजको राशिफल : २०७४ साल माघ २५ गते विहिबार
श्रीसूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, साधारण नाम संवत्सर, शाके १९३९, विक्रसम्वत २०७४ साल माघ २५ गते विहिबार
नेपाल सम्बत ११३८ शिल्लागा,सन् २०१८ फेब्रुअरी ८ तारिक फाल्ुगन कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि अपराान्ह १ वजेर २७ मिनेटसम्म, विशखा नक्षत्र अपरान्ह ५ वजेर ३० मिनेटसम्म, वृद्धियोग, कौलवकरण,आनन्दादियोग प्रवद्र्ध,सूर्य मकर राशीमा,चन्द्रमा विहान ११ वजेर ५ मिनेटसम्म तुला उप्रान्त वृश्चिक राशीमा ।
ॐः–सूर्योदयबाट प्रातः ८÷११ वजेसम्म शुभ वेला,८÷११ वजेदेखि ९÷३४ वजेसम्म रोग वेला,९÷३४ देखि १०÷५६ वजेसम्म उद्वेग वेला,१०÷५६ देखि १२÷१९ वजेसम्म चर वेला,१२÷१९ देखि १÷४१ वजेसम्म लाभ वेला,१÷४१ देखि ३÷४ वजेसम्म अमृत वेला,३÷४ देखि ४÷२६ वजेसम्म काल र ४÷२६ वजे देखि सूर्यास्तसम्म शुभ वेला रहनेछ ।
ॐः–सूर्यास्तबाट ७÷२७ वजेसम्म अमृत वेला,७÷२६ वजेदेखि ९÷४ वजेसम्म चर वेला,९÷४ देखि १०÷४२ वजेसम्म रोग वेला,१०÷४२ देखि १२÷१९ वजेसम्म काल वेला,१२÷१९ देखि १÷५६ वजेसम्म लाभ वेला,१÷५६ देखि ३÷३४ वजेसम्म उद्वेग वेला,३÷३४ वजे देखि ५÷११ वजेसम्म शुभ र ५÷११ वजे देखि सूर्योदयसम्म अमृत वेला रहनेछ ।
ॐः–राहुकालः– अपरान्ह १÷४० वजेबाट ३÷३ वजेसम्म रहनेछ, यमघण्टायोगः– विहान ६÷८ वजेबाट ८÷११ वजेसम्म रहनेछ, दूरमुहूर्तः– पूर्वान्ह १०÷२८ वजेबाट ११÷१२ वजेसम्म र अपरान्ह २÷५२ वजेबाट ३÷३६ वजेसम्म रहनेछ, यी अशुभ मुहूर्त मानिन्छ । शुभ अभिजित मुहूर्तः– पूर्वान्ह ११÷५६ वजेबाट मध्यान्ह १२÷४० वजेसम्म रहनेछ, । गुली कालः– विहान ९÷३३ वजेबाट १०÷५६ वजेसम्म रहनेछ ।
मध्यान्ह सम्म समय अनुकुल नै देखिन्छ । जीवन साथीको सहयोगमा महत्वपूर्ण काम हुनेछन् । आयत निर्यात व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । अपरान्ह देखि समयले कम साथ दिनेछ ।
आत्मबल आत्म विश्वास बढ्नेछ । ऋणबाट मुक्त हुने अवस्था आउनेछ । काममा अवरोध खडा गर्न खोज्ने कम हुने छैनन तर अन्त्यमा हार्ने छन् । नयाँ कामको बारेमा विचार विमर्श हुनेछ ।
योजना बद्ध अगाडि बढ्नु होला सफल हुनुहुनेछ । भय आतुरमा काम गर्दा विग्रिने छन् । अरुको सल्लाहा गलत हुनसक्छ । विरोधीको बक्रदृष्टिबाट बच्नु होला । अशुभ असमाचार सुन्नु पर्ला ।
सोच विचार काम गर्नु होला गरेका काम सफल हुनेछन् । धन सम्पतिको विषयमा थोरै तनाव हुनसक्छ । कर्म अनुसारको फल मिल्नेछ । अरुको भरमा मात्रै काम नगर्नु होला ।
मध्यान्ह पूर्व समय जति अनुकुल हुन्छ त्यति अपरान्ह हुने छैन । काममा सानातिना समस्या आउने छन् । नोकरी तथा राजनीतिमा देखिएको सम्भावना क्षीण भएर जानेछ । आम्दानी घट्नेछ ।
संचित धन बढ्नेछ । कार्य लगनशिलता विस्तारै बढ्नेछ । सहयोगी हात भेटिने छन् । व्यापार व्यवसायमा क्रमिक सुधार आउनेछ । रोकिएका काम अगाडि बढ्ने छन् ।
लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । घरका कामले थोरै बोझिलो बनाउनेछ । आफ्नो धन अरुलाई रजाई हुनसक्छ । मनोरञ्जनमा धन खर्च हुनेछ । धन संचितिमा ह्रास आउनेछ ।
मध्यान्ह सम्म समय प्रतिकुल देखिन्छ । भाग्यले कम साथ दिनेछ । गरेका कामबाट उचित लाभ लिन सकिने छैन । अपरान्ह देखि कामले गति लिनेछ । निर्णय क्षमता बढ्नेछ ।
मध्यान्हसम्म समय सामान्य अनुकुल देखिन्छ । गरेका काम बन्ने छन् । अपरान्ह देखि भने समयले कम साथ दिनेछ । काममा गतिरोध उत्पन्न हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ ।
व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा सुधार आउनेछ । नजिकका व्यक्तिबाट सहयोग मिल्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा सफलता मिल्नेछ । लेनदेन कारोवारमा भने सतर्क रहनुहोाल ।
मध्यान्ह सम्म समय प्रतिकुल छ । काममा भाजो हाल्ने छन् सहज तरिकाले काम हुने छैनन । अपरान्ह देखि भने समयले साथ दिनेछ । रोकिएका काम अगाडि बढ्ने छन् । सहयोग मिल्नेछ ।
दिशा हिन यात्रा हुने देखिन्छ । कार्य दिशा स्पष्ट नहुदा बढि अलमल हुनेछ । इज्जत प्रतिष्ठमा आच आउन सक्छ । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दि कायम रहनेछ । सहयोगी हात हराउने छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २५, २०७४ समय: ४:०७:०७
पशुपतिनाथले सबैको मनोकाक्षा पुरा गरुन ! आजको राशिफल : २०७५ साल भाद्र ४ गते सोमवार
मनकामना माताले सबैको मानोकाक्षा पुरा गरुन ! आजको राशिफल : २०७५ साल भाद्र ३ गते आइतबार
साप्ताहिक राशिफल : (भाद्र२गते देखि ८ गतेसम्म) पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन !
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! आजको राशिफल : २०७५ साल भाद्र २ गते शनिवार
पशुपतिनाथले सबैको मानोकाक्षा पुरा गरुन ! आजको राशिफल : २०७५ साल भाद्र १ गते शुक्रवार
मनकामना माताले सबैको मनोकाक्षा पुरा गरुन ! आजको राशिफल : २०७५ साल श्रावण ३१ गते विहिवार
पशुपतिनाथले सबैको मनोकाक्षा पुरा गरुन ! आजको राशिफल : २०७५ साल श्रावण ३० गते बुधवार
पशुपतिनाथले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : आजको राशिफल : २०७५ साल श्रावण २९ गते मंगलबार